Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "vhiri werombo rakanaka", iro shamwari manzwiro?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "vhiri werombo rakanaka", iro shamwari manzwiro?
Number "vhiri werombo rakanaka" mu "njodzi vhiri" 3500 Yen kune zvinoreva
nyanzvi kufembera ari neizvi nzvimbo usununguke yokunyatsoongorora nzira
vachishandisa kadhi, imi vari kadhi zvake ari Major Arcana, vasiyana kadhi zvichava 10. In nechepakati kadhi, vave vakavhomora denderedzwa guru, akadai chifananidzo hwakafanorongwa, ichi ndicho chiratidzo zvichaitirwa kuti rinomiririra kutsungirira uye periodicity.
kadhi iri, izvo zvinoreva hombe wematambudziko uye kuchinja kuti zvisingagoni achipfuura kudzivisa woga. Vamwe kuti mugumo uye kuchinja mumugwagwa, yakanga kutarisirwa woga kushanya, dzimwe nguva zvinoitika kuti akanga asina chinangwa vose kuti kutarisirwa zvaizonetsa. Sezvo
kuratidzwa yake pedyo aibuda zvakafanorongwa guru kuti kuita hapana, zvingava kuti kunokosha kwegadziriro pfungwa kugamuchira zvaitika.
Kana mavhiri manzwiro
kutapwa munhu iwe zvakanaka nzvimbo iri nokuzvikudza kuti zvinoreva "Wheel pakati Fortune" raiva zvakanaka chinzvimbo, mugumo ndiko achiratidza kuti zvinofamba nenzira inogona kuva gutsa kwauri iwe. dzimwe nguva iwe kuchatungamirira anokarirwa zvabuda kuti raiva rimwe bato uye chaizvoizvo zvose manzwiro rusina kukwana mberi rudo, pangava chizvireururai kubva mumwe bato haana kuziva chete neshamwari kusvikira zvino.
maererano dzakanaka nokuchinja kwandiri, ndizvo chaizvo kusangana inogona kutarisirwa kunge. Ndiani vanditarisire hazvirevi hazvo kuti ndizvo ini anoziva pachangu, magumo nekuti iwe hauna kutarisana ndinoiitawo kwandiri, chinhu chakanaka pfungwa kuti ushingi bvunza manzwiro mamwe bato. Kunyange kana upi nekutumirwa kwemauto, uye pakupedzisira ndiyo zvakafanorongwa kuti anogona kuva vanofara.
kana vhiri werombo rakanaka riri zvakanaka nzvimbo, zvakakodzera kuvimba aibuda wematambudziko. Unogona kuti akatambanudza ruoko Kana uchifunga mukana, zuva rimwe nerimwe kudzikama kunzwa kutenda pamucheto nomumwe Rega shandisa. Sezvo mwarikadzi wematambudziko Zvirokwazvo kwangu kunyemwerera kwamuri.
nyaya vhiri manzwiro
kutapwa munhu iwe harungashandurwi nzvimbo iri nokuzvikudza kuti zvinoreva "vhiri werombo rakanaka" ndiye neizvi nzvimbo, mune dambudziko usingagoni kuchinjwa, kwete wokupedzisira faced zvingangoitika kuti tichava hakurevi yakakwirira. Kana kutenga wake mumwe bato kuti kunetseka, kana kare kuroorana, pangava chokuti pamwe akaroora munhu.
Uyezve, kana kuipa kure kwakatonyanya nokuisa kana dambudziko nevamwe bato, zvingaguma kuchinjirwa kune kure pachinhu basa rakadaro.
kana wava haisi kufara aibuda iri, achaiswa ikatanga ini kunyika dzakawanda isingafadzi kutungamirira uye azvipe kuerera. Exit kubva chekubuda nekukurumidza, kuburikidza apiwa pakaitika chinangwa, vachakwanisa kuvakazve mugumo yavowo.